सभामुखमा फेरि सुवासचन्द्र नेम्बाङ नै आउलान् ? - NepalKhoj
सभामुखमा फेरि सुवासचन्द्र नेम्बाङ नै आउलान् ?
नेपालखोज २०७६ मंसिर २७ गते ७:४८
२७ मंसिर, काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सभामुखको उम्मेदवार छान्न सकस परेको छ । पार्टीले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले नाम टुंगो लगाउन नसकेका हुन्। दुवै अध्यक्ष आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुखको जिम्मेवारीमा पु-याउने रणनीतिमा तल्लीन रहँदा रिक्त सभामुखमा पार्टीका तर्फबाट कसलाई अघि सार्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो।
दुई पार्टी एकीकृत हुनुअघि तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको सभामुख यसपटक भने खोसिने सम्भावना बढेको छ। दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मासहित कार्यकारी अधिकार दिएपछि ओलीलाई सभामुख छान्ने अधिकार दिने सम्भावना रहेको पार्टी निकट स्रोतले जनाएको छ।
पूर्वमाओवादीका देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले सभामुख बन्न दाबी गरिरहेका छन् भने पूर्वएमालेका नेताहरु मौन छन्। धेरैले संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ नै नयाँ सभामुख हुने अड्कल काटेका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।